यस्तो छ आजको बिदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्रिदर::Hamrodamak.com
यस्तो छ आजको बिदेशी मुद्राको खरिददर र बिक्रिदर
काठमाडौँ,२१ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ . ५ ० र बिक्रिदर ११७ . १० रहेको छ ।
यूरो एकको खरिददर १३२ . ७८ र बिक्रिदर १३३ .४६ तोकेको छ । त्यस्तै एक पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर १५१ . ८७ र बिक्रिदर १५२ . ६५ रहेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको यस दररेटमा भने वाणिज्य बैंकहरुले केही रकम थपघट गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले अन्य बिदेशी मुद्राको खरिद दर र बिक्रि दर भने यसप्रकार तोकेको छ :